Maxaa Trump ku khasbay inuu cuna qabateynta ka qaado Turkiga? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMaxaa Trump ku khasbay inuu cuna qabateynta ka qaado Turkiga?
Washington (JigjigaOnline) – Madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in dhamaan cuna qabateynadii la saaray Turkiga oo la xiriirtay weerarkii Turkigu ku qaaday deegaanada xoogaga kurdiyiintu haytaan ee waqooyi bari suuriya la qaaday .
Ciidamada Turkiga ayaa sii wada gacan ku haynta aagga ay qabsadeen muddadii uu socday dagaalka ay kula jiraan kurdiyiinta, Turkiga oo xoogaggaasi u arko iney yihiin argagixiso.
Qorshaha Turkiga uu aaggaasi ka damacsan yahay ayaa waxaa ka mid ah inuu “aag ammaan ah” ka abuuro xadka uu la wadaago Suuriya kaddibna uu dajiyo qoxooti ka badan Laba milyan oo Suuriya ka soo jeeda.
Dhanka kale Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay gaareen Turika iyo Ruushka.
Hadaba maxaa ka mid ahaa heshiiskaasi?
Dagaallamayaasha xooggaga kurdiyiinta ayaa loo qabtay 150 saacadood iney xadka ka fogaadaan 30 killo mitir laga billaabo caawa.
Warmurtiyeed ay si wadajir ah u soo saareen Ruushka iyo Turkiga ayaa lagu sheegay in xoggaga kurdiyiinta ” laga saarayo” Manbeyj iyo magaalada Tal-rifar oo 50 kiilo mitir u jirta kuna beegeen galbeedka dhulka uu Turkigu howlgalka ka wado.
Khasaare intee la eg ayuu geystay gulufka Turkiga ee waqooyiga Suuriya?
Qaramada Midoobay waxay sheegtay dad ka badan 176,000 oo ay ka mid yihiin 80,000 oo carruur ah iney labadiI toddobaad ee ugu dambeeyey oo keli ah ay ka barakaceen waqooyiga-bari ee dalka Suuriya, iyada oo ay aaggaasi ku nool yihiin dad ka badan 3 milyan oo qof.
Dad ka badan 120 qof oo rayid ahna ay ku dhinteen dagaallada ka dhacayey Waqooyiga Suuriya iyo dagaallamayaasha Kurdiyiinta oo gaaraya 259, 196 ka mid ah maleeshiyada Suuriya ee xulafada la ah Turkiga iyo 7 askari oo ciidamada Turkiga ah.
20 qof oo rayid ah ayaa sidoo kale lagu dilay weerar ay YPG ku qaadeen qayba ka mid ah dalka Turkiga, sida ay sheegeen saraakiisha Turkiga.